भरतपुर महानगर प्रकरणमा के के भयो जेठ १४ को मध्यराती देखि सर्वोच्चको फैसालसम्म | News Dabali
भरतपुर महानगर प्रकरणमा के के भयो जेठ १४ को मध्यराती देखि सर्वोच्चको फैसालसम्म
July 31, 2017 | 6:56 pm
चितवन । सर्वोच्च अदालतले साँढे दुइ महिनापछि भरतपुर महानगरको मतगणना बिवाद प्रकरणलाई अन्तिम फैसला आइतबार साँझ सुनाए पछि सबैको ध्यान पुनः भरतपुरतर्फ धकेलिएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि यहाँ पुनः मतदान गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
तर आयोगको निर्णय विरुद्ध पुनःमतदान नभई मतगणना नै हुनुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले रिले अनशन देखी जुलुस प्रदर्शन सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिट दायर गर्नेमा भरतपुर १९ का एमालेका तर्फबाट भरतपुर—१९ मा खुला सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जन विक र भरतपुर १९ कै मतदातासमेत रहेका अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डे छन् । उनले पुन मतदान गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै गत जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार ६ गते एक साताको समयसिमा तोकेर च्यातिएका मतपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । पटक पटक सरेर अन्ततः आइतबार भरतपुर—१९ को मतपत्र च्यातिएका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गर्दै पुनः मतदान गर्ने फैसला सुनाएको हो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले ऐनको व्यवस्थामा टेकेर वडा नं १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
घट्ना कसरी हुन पुग्यो ?
गत जेठ १४ गते राती एघार बजेर ५३ मिनेट जाँदा साविकको जिल्ला विकास समिती अगाडि रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको कभर्डहलमा मतपत्र च्यातिएपछि एकाएक माहोल बदलियो । मतपत्र च्यातिए लगत्तै निर्वाचन अधिकृतले मतगणना स्थल ‘सिल’ गरेर मतपत्र च्यातेको रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा पठायो । कुल २९ वडामध्ये २७ वडाको मतगणना सकिँदासमेत कसैले परिणामको आँकलन गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
जब १९ नम्बर वडामा रहेका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधि द्रोणबाबू सिवाकोटी र मधुसुदन न्यौपानेले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना रोकिन पुग्यो । त्यसपछि , भरतपुर घटनाका बिषयलाई लिएर बसेको आयोगको बैठकले सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगका सहन्याधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अनुगमन टोली गठबन गरी चितवन पठाएको थियो ।
टोलीले स्थलगत अनुगमन, सरोकारवालासंग छलफल र सोधपुछ गरेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय , निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल, मतगणना खटिएका निर्वाचन आयोगका कर्मचारी लगायत प्रत्यक्षदर्शी संग भेटेर छलफल गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाईयो। टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले गत जेठ २० गते भरतपुर—१९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मतपत्र च्यात्तिनु अघि एमालेका उम्मेद्वार देवी ज्ञवालीले ४० हजार ९ सय ८० मत ल्याएका थिए भने माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले ४० हजार १ सय ९६ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । माओवादी केन्द्रका दुईजना कार्यकर्ताले मतपत्र च्याते त्यसपछि यो बिषय सदन देखी सडक हुँदै राष्ट्रिय चासोको विषय सम्म केन्द्रित बन्न पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छः रेणु दाहाल
माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका संयुक्त गठबन्धन बनेकी भरतपुर महानगरपालिकाको संयुक्त मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहालले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वागतयोग्य रहेको बताएकी छिन् । आइतबार साँझ भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उम्मेद्वार दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला न्याय संगत भएको छ । यो निर्णय कसैको पक्ष वा विपक्ष भन्नेमा छैन्, उनले भनिन् ढिलै भए पनि “जनताको अभिमतको कदर भएको छ, मतदान गर्न पाउने जनताको अधिकार हो त्यो सुरक्षित भएकोमा म खुशी छु ।” उम्मेद्वार दाहालले सर्वोच्च अदालतले प्रचलित नियम कानुनको आधारमा नै फैसला गरेकोले न्यायको प्रत्याभुति भएको बताइन् । “दोश्रो चरणको निर्वाचन सकिएर तेस्रो चरणको मिति तोकिए लामो समय बितेपछि अदालतले फैसला गरेको छ । यो निर्णय कुर्न निकै धैर्य गर्नुपर्यो ।
फैसला मान्दिनँ भन्न मिल्दैन्, चित्त बुझेको छैन्, न्यायोचित भएन्ः देवी ज्ञवाली
नेकपा एमालेका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बनेका देवी ज्ञवालीले जनता नै ठूलो अदालत भएको बताएका छन् । उनले चोरलाई चौतारी र साँधुलाई सुली चढाउने प्रवृत्तिको जनताले नै फैसला गरेर छाड्ने दावी गरेका हुन् । न्यायलयभित्र राजकीय हस्तक्षेप जारी रहेको भन्दै जनमतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार साँझ गरेको निर्णयलाई लिएर मेयर उम्मेद्वार ज्ञवालीले भने, ”।
सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने फैसला गर्नु मतपत्र च्यात्ने कदमको बैधानिकता दिएको ठहर गर्दै जनताले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका हुन् । जसले मतपत्र च्यात्यो उसैको पक्षमा सर्वोच्च लाग्छ, म माथि अन्याय भयो ।” “मतपत्र च्यात्नेकै पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्नु दुःखद् छ ।
जनता त्यो निर्णयलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । एमालेको पक्षमा मतदान गरेर अदालतको निर्णय सच्च्याउने छन् ।” “नाटक गर्नेहरुको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय आयो, न्यायलयबाट न्याय नपाए पनि जनताले आफूलाई न्याय दिलाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
फैसला हेरेपछि थाहा हुन्छः प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यौपाने
यता , भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुनः मतदान गराउन आइतबार आदेश दियो । यो आदेश झन्डै साँढे २ महिनापछि टुंगोमा पुग्यो । यहीँ आदेशको दौरान १९ नम्बर वर्डाको मतदान अब कहिले हुन्छ ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले फैसलाको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्र यसबारे जवाफ दिन सकिने बताए । उनले भने ,सर्वोच्चले पुनः मतदान गराउने निर्णय सदर गरेको छ भन्ने मैले जानकारी सञ्चारमाध्यम मार्फत पाएको छु । उनले भने ।